Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zobuchwephesha kubathengi bayo ngexesha lokusebenza koomatshini abasebenza ngobukhulu, indawo yokusebenza kufuneka ibekwe ngokufanelekileyo kwindawo esisigxina kwisixhobo somatshini ngexesha lokusetyenziswa. Ukuthintela umsebenzo ngexesha lenkqubo machining. Xa ukufuduka kuhambelana ...
Athini amanqaku obuchwephesha bokusebenza ngokuchanekileyo kwezahlulo zomatshini
Phambi machining ngqo yamalungu auto, kuyimfuneko ukuqonda ngokuchanekileyo ulwazi olufanelekileyo Shenzhen ngqo machining. Ke, ngawaphi amanqaku obuchwephesha bokuchaneka ngokuchanekileyo? 1.Lula ukulungiswa kunye nokugcinwa komatshini, gcina abasebenzi, ukusika ngomatshini kunye ne-proce ...
Imiba elishumi echaphazela ukuchaneka machining kwamalungu ngqo
Njengoko sonke sisazi, isizathu sokuba ukwenziwa kwamalungu achanekileyo kubizwa ngokuba kukuchaneka ngokuchanekileyo kungenxa yokuba iinkqubo zokuqhubekeka kunye neemfuno zenkqubo ziphezulu kakhulu, kunye neemfuno zokuchaneka kwemveliso ziphezulu kakhulu, kwaye ukuchaneka kokuqhubekeka kweendawo ezichanekileyo kubandakanya. ..
Ukulungiswa kwemitshini kuqhelekile kwaye kudityaniswa yonke inkqubo yenkqubo. Ukulungiswa kwemitshini ekubhekiswa kuyo apha kubhekisa ngokukodwa kwiindlela zokuqhubekeka ezisetyenziselwa unyango lomphezulu womhlaba. Kukho ukugqagqana okungagungqiyo kunye nokulungiswa kwemitshini kwi "Ukwenza i-P ...
Ngawaphi amashishini asisixhobo seqokobhe lesinyithi esiqhubekeka sisetyenziswa ikakhulu, kwaye zeziphi iimfuno ezithile?
Ukucwangciswa kwesinyithi kwesixhobo seqokobhe ikakhulu kubhekisa kukuqhubekeka kokuqhubekeka kwamacwecwe omkhosi, kwaye inokudlala indima enkulu kakhulu kule nkqubo. Kungenxa yokuba iinxalenye zayo ezenziweyo zinamava, ke kwicandelo liphela liye latsale umdla wabantu abaninzi ...
Uyenza njani indlela yokulungiswa kwesinyithi yezixhobo zeqokobhe elingcono kwaye zeziphi iinkcukacha ekufuneka ziqwalaselwe
Zininzi iinkqubo zokulungiswa kwesinyithi kwiqokobhe lezixhobo. Kwinkqubo yokwenza, kuya kufuneka unike ingqalelo kwiinkcukacha zayo yonke imiba, ukuze idlale indima ebhetele. Abantu abaninzi bajonga le miba ikhethekileyo. Mhlawumbi andazi kangako malunga ne-sp ...
Iqhubekekisa iimpawu izixhobo umatshini CNC
1.Ukuguquguquka Xa kusenziwa umsebenzi omtsha kwisixhobo somatshini we-CNC, ukuqhubekeka kwendawo yokusebenza kunokufezekiswa kuphela ngokwenza inkqubo yokuprinta ngokutsha yomsebenzi omtsha. Xa kusenziwa izixhobo zokusebenza kumatshini we-CNC, zintle izinto ezilula ezifunekayo, kwaye akukho sidingo sokwenza ...